Atam oo Golaha Amaanku ka saaray liiska cunaqabateynta 1844 & DFS oo soo dhaweysay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20th December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mogadishu, 20 December 2014 – Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ayaa soo dhoweysey go’aanka Golaha Ammaanka ee QM oo ay liiska cunaqabateynta 1844 ay uga saareen hoggaamiyahii hore ee Al-Shabaab-ka Puntland, Sheekh Maxamed Saciid “ATOM” oo horey u shaaciyey inuu nabada qaatay.
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta, Mustafa Sheekh Cali Dhuhulow, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa yiri “Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) waxey soo dhoweyneysaa go’aanka Golaha Ammaanka QM oo ay Sheikh Atom uga saareen liiska cunaqabatenta 1844. Dowladda ayaa la xaajootay QM iyo waddamada xubnaha ka ah Golaha Ammaanka ee QM si loogu guuleysto in muwaadin Soomaaliyeed oo ka baxay kooxaha argagaxisada isla markaasna nabadda qaatay in laga saaro liiska cunaqabateynta. Tani waa tallaabo weyn oo Atom kaliya ma ahee xitaa dhammaan dadka nabadda jecel ayey guul u tahay. Tani waa habka uu caalamka isku raacsanyahay oo lagu gaari karo nabad. ”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamud ayaa horey cafis ugu fidiyey shaqsiyaadka doonaya inay nabadda qaataan. Sheekh Atom waxuu qaatay nabad, haddana waan u jeednaa faa’iidada nabadda oo maanta waa nin xor ah. Atom waxuu ballanqaaday inuu sii xoojinayo nabada oo uu doonayo inuu tusaale fiican u noqdo shaqsiyaadka weli xubnaha ka ah kooxda Al-Shabaab ee doonaya inay qoryaha iska dhigaan oo nabadda ay qaataan. Atom ayaa horey u yiri ‘Waddada aan doortay waa midda Nabadda.”
Xarunta Wasaarada Gaadiidka ee Gobolka Sh/Dhexe oo